Archive ho an'ny sokajy: Osteoarthritis (Osteoarthritis)
Lahatsoratra momba ny Osteoarthritis (Osteoarthritis)
Eto isika dia mampiseho fampahalalana momba ny lahatsoratra isan-karazany nosoratantsika momba ny osteoarthritis (osteoarthritis). Osteoarthritis dia fantatra koa amin'ny hoe osteoarthritis ary misy fihenan'ny ratra, potipotika, ary koa ny akanjo mifangaro sy ny cartilage.
Ny lahatsoratra momba ny osteoarthritis sy akanjo miaraka dia nosoratan'ireo matihanina ara-pahasalamana nahazoana alalana amin'ny kiropraktika sy physiotherapist.
Ny sehatra 5 amin'ny Kneartrose
06 / 10 / 2018 /Fanamarihana 0/i Osteoarthritis (Osteoarthritis), lohalika, rheumatism/av loza
Fantatrao ve fa ny osteoarthritis amin'ny lohalika dia mizara ho dingana dimy miankina amin'ny halalinany? Ny aretin-doha dia mandoa ny akanjo miaraka amin'ny lohalika ary mety hiteraka olana lehibe ary koa ny fanaintainana. satria miharatsy ny fahasalamana.
Miady ho an'ny olona voan'ny fanaintainan'ny fanaintainan'ny fanaintainany sy ny rheumatism koa isika mba hanana fotoana tsara kokoa hikarakarana sy hanaovana fanadihadiana. Toa anay ao amin'ny pejin'ny FB og fantsona YouTube ao amin'ny media sosialy hanatevin-daharana antsika amin'ny ady ho amin'ny fiainana andavanandro ho an'ny olona an'arivony.
Ity lahatsoratra ity dia handalo amin'ny ambaratonga dimy osteoarthritis amin'ny lohalika. Eo am-pototry ny lahatsoratra azonao atao koa ny mamaky tsikera avy amin'ny mpamaky hafa, ary koa mijery horonantsary misy fanazaran-tena namboarina ho an'ny aretin'ny lohalika. Mizara ny aretin'ny lohalika amin'ny sehatra manaraka izahay:
Ny dingana tsirairay dia manana toetra sy soritr'aretina tokana. Vakio bebe kokoa momba izany eto ambany.
Torohevitra: Betsaka ny olona manana osteoarthritis no te hampiasa fonon-tànana famatrarana namboarina manokana (misokatra amin'ny varavarankely vaovao ny rohy) ho an'ny fanatsarana ny asa amin'ny tanana sy amin'ny rantsantanana. Ireo dia mahazatra indrindra eo amin'ireo rheumatologists sy ireo izay mijaly amin'ny syndrome carnel tunnel maharitra. Mety misy koa mpantsaka rantsan-tongotra og ba kiraro fametahana namboarina manokana raha manelingelina anao ny rantsan-tongotra henjana sy maratra - mety ho hallux valgus (rantsantanana lehibe mivadika).
Vakio koa: Izao no tokony ho fantatrao momba ny Osteoarthritis amin'ny knees
Ny dingana 0 amin'ny osteoarthritis amin'ny lohalika dia midika fa ny lohalika dia manana fahasalamana mahazatra miaraka ary tsy mampiseho famantarana ny osteoarthritis na fandringanana iraisana. Mba ho eo amin'ny sehatra 0, ny lohalika dia tsy maintsy mihetsika miaraka amin'ny hetsika feno ary tsy misy fanaintainana mandritra ny hetsika.
Fitsaboana: Ny fisorohana ny fivoaran'ny osteoarthritis dia tena zava-dehibe indrindra rehefa eo amin'ny sehatra 0 ianao ary salama tsara ny lohalika. Ny fisorohana toy izany dia momba ny fanamafisana ny hozatra manamaivana ny lohalika. Ny hozatra manandanja indrindra hanamaivanana ny lohalika maratra dia hita - mahagaga ny maro - amin'ny hozatry ny valahana, ny vodiny sy ny feny; araka ny voasoratra tamin'ny fikarohana (1). Amin'ireo horonantsary roa eto ambany dia hahita ohatra momba ny fanatanjahan-tena tsara ianao.
SARIPIKA: Fanatanjahantena 10 ho an'ny Hip (tsindrio etsy ambany hanombohana ny horonantsary)
Aza misalasala misoratra anarana amin'ny fantsona antsika - ary araho ny pejinay ao amin'ny FB isan'andro, toro-hevitra momba ny fahasalamana maimaim-poana sy programa fanatanjahan-tena izay afaka manampy anao amin'ny fahasalamana tsara kokoa.
Lahatsary: ​​Fanafody 6 hanoherana ny aretin-dohalika lehibe (Osteoarthritis amin'ny knees)
Ireto misy fanazaran-tena enina izay mirotsaka amin'ireo izay voan'ny osteoarthritis amin'ny lohalika. Ny fampiasana tsy tapaka amin'ny fanazaran-tena toy izany dia ilaina amin'ny fitazonana ny ra mivezivezy eo an-toerana, manamaivana ny fanazaran-tena amin'ny tongotra ary hanatsara ny fahasalamana meniskus. Ny fanazaran-tena dia azo ampiasaina koa amin'ny fisorohana.
Nahafinaritra anao ve ireo horonan-tsary? Raha nanararaotra azy ireo ianao dia tena tianay ny handray anjara aminao amin'ny fantsona YouTube izahay ary manome azy ireo rantsan-tànana ao amin'ny media sosialy. Midika be izany ho antsika. Misaotra betsaka!
Fanaintain'ny aretina amin'ny fiainana andavanandro
Betsaka ny olona mararin'ny fanaintainana mafy izay manimba ny fiainana andavanandro - izany no antony amoahanay anao Zarao ity amin'ny media sosialy ity lahatsoratra ity, Aza misalasala mankafy ny pejy Facebook anay ary lazao hoe: "Eny amin'ny fikarohana bebe kokoa momba ny aretina mitaiza fanaintainana maharitra". Amin'izany fomba izany, ny olona iray dia afaka mampiharihary ireo soritr'aretina mifandraika amin'ity aretina ity ary manome antoka fa olona maro no raisina am-pahamatorana - ary amin'izany dia mahazo ny fanampiana ilain'izy ireo. Manantena koa izahay fa ny fitomboan'ny fiheverana toy izany dia afaka mitarika famatsiam-bola bebe kokoa amin'ny fikarohana momba ny fomba fanombanana sy fitsaboana vaovao.
Vakio koa: - Famantarana Rheumatism 15 voalohany
Voan'ny tratran'ny rheumatism ve ianao?
Ao amin'ny dingana voalohany ny osteoarthritis ny lohalika, ny olona dia mahita ny fihenan'ny degenerative kely amin'ny tonon-dohalika. Ireo fiovan'ny fanovana ireo dia mety misy fiovana kely sy fanovana kely ao amin'ny tonon-taona izay iarahan'ny tongotra.
Na amin'ity dingana ity dia mila miaina fanaintainana na tsy fahampiana ao anaty lohalika ianao. Mazava ho azy fa tsy noho ny mariky ny lohalika, fa ny hozatra sy ny hozatra manodidina dia mazava ho azy maharary toy ny maro hafa.
Fitsaboana: Ny fanatanjahan-tena sy ny fanarenana fisorohana fisorohana dia zava-dehibe hisorohana ny dingana 1 ka hatramin'ny dingana manaraka. Averina indray, araka ny voalaza tao amin'ny fizarana teo aloha, ny fampiofanana ny valahana, ny seza ary ny feny no tena tokony hifantohanao raha te hanala ny lohalika ianao. Raha sarotra aminao ny mampiofana amin'ny fomba nentim-paharazana - dia afaka manolotra ihany koa izahay fiofanana amin'ny dobo rano mafana.
Raha nitombo ny fihanaky ny osteoarthritis sy ny akanjo miaraka eo amin'ny fianakaviana, famenon-tsakafo toy ny glucosamine sulfate sy chondroitin dia mety koa mifanentana amin'ny fampiasan'ny lohalika.
Vakio koa: - Ahoana no hanampiana ny fampihetseham-batana amin'ny dobo rano mafana amin'ny Fibromyalgia
Ny dingana 2 amin'ny osteoarthritis amin'ny lohalika dia mbola antsoina hoe famotsorana tsotra amin'ny akanjo miaraka amin'ny lohalika. Amin'ny fakana sary, toy ny taratra X, dia ho hitanao izao ny fiakanjoana marobe sy ny fanamafisana eo amin'ny tadin'ny lohalika - fa ny taolam-paty dia mbola ho simba sy vaovao ihany. Rehefa miresaka momba ny fahasalaman'ny tazomoka tsara isika, ankoatra ny zavatra hafa, dia manondro ny meniskus sy ny elanelana misy eo amin'ny shins sy ny femur. Amin'ny halavirana ara-dalàna, ireo tongotra ireo dia tsy hifampitsivalana sy hikosoka, ary hisy fatran'ny tsiranoka iraisana (tsiranoka mitambatra synovial) ao amin'ny valan'ny lohalika.
Izany matetika dia ny atin'ny osteoarthritis izay ahitana ny fanaintainana voalohany sy ny soritr'aretina (noho ny osteoarthritis tenany). Ny soritr'aretina mavesatra sy ny fanaintainana amin'ny voalohany dia mety maharary amin'ny lohalika aorian'ny fandehanana na mandeha jog, ary koa ny fampitomboana ny hatsiaka amin'ny lohalika rehefa tsy ampiasaina mandritra ny ora maromaro. Ny manodikodina na manondraka ny lohalika dia mety ho lasa sarotra kokoa ihany koa.
Fitsaboana amin'ny sehatra 2
Averina indray, ny fanaovana fanatanjahan-tena sy ny fisorohana dia hanana andraikitra lehibe indrindra - ary indrindra hanakanana ny akanjo sy rovitra iraisana tsy hiharatsy. Raha hitanao fa sarotra ny manomboka amin'ny fanatanjahan-tena sy fanaovana fanatanjahan-tena, dia tena mamporisika anao izahay hanatona mpitsabo aretin-tsaina hanombohana ireo fanazaran-tena mety. Amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny hozatra manodidina ny tonon-taolana, mitombo ny fitoniana amin'ny lohalika - izay mampihena ny fahafahan'ny fahasimbana mitambatra.
Ny fiterahana koa dia olana iray izay manampy amin'ny hainganana bebe kokoa amin'ny tonon-taolana mitondra lanja - ary izany indrindra no antony maha-zava-dehibe ny fihenan-danja raha manana BMI ambony ianao (index body mass). Raha toa ka sarotra aminao ny manomboka amin'ny fanatanjahan-tena sy ny fanazaran-tena, dia manolo-kevitra anao izahay mba hijery mpitsabo ara-batana hanombohana ny fanazaran-tena mety.
En ny fanohanan'ny lohalika (misokatra amin'ny varavarankely vaovao) dia mety ho fitaovana ilaina hanampiana amin'ny fametrahana ny lohalika raha mampitombo ny fikorianan'ny ra ao an-toerana. Betsaka ny olona no manomboka mihinana fanafody fanaintainana sy NSAIDR rehefa manomboka mizaka ny fanaintainan'ny lohalika izy ireo, saingy noho ny loza mety hitranga amin'ny fampiasana maharitra - toy ny fery amin'ny vavony, ny aretim-po, ny fahasimban'ny voa ary ny olan'ny aty - tsy zavatra anoloranay izany. Amin'ity tranga ity, ny fampiasana zava-mahadomelina toy izany dia tsy maintsy atao eo ambany fanaraha-mason'ny GP anao.
Vakio koa: - Tatitry ny fikarohana: Ity no sakafo Fibromyalgia tsara indrindra
Kitiho ny sary na rohy etsy ambony raha te hahalala bebe kokoa momba ny sakafo mety ampifanarahina amin'ny fibro.
Amin'ny dingana 3, ny volon'ny lohalika dia nanjary antonony ary efa manomboka mihamalalaka ny akanjo miaraka. Midika izany fa ny faritry ny toerana ao anaty lohalika dia tery mazava tsara ary ny vata miharihary dia mampiseho famantarana mazava amin'ny ratra (anisan'izany ny tendrony ho ambany noho ny mahazatra).
Matetika dia hita amin'ity dingana ity fa manomboka manjary maharary ny osteoarthritis amin'ny lohalika - ary na ny hetsika mahazatra toy ny mandeha, miondrika, ny jogging maivana na ny mandohalika dia miteraka fanaintainana. Noho ny akanjo fiarahan-doha lehibe kokoa dia afaka manomboka mahatsikaritra ihany koa ianao mivadika sy ny lohalika miaraka amin'ny lohalika raha misy fihenjanana sy asa be dia be.
Fitsaboana amin'ny sehatra 3
Indray mandeha indray, hiditra ao anaty peratra isika ary hanao dona amin'ny fampiofanana - eo ambanin'ny rafitra mety. Io no fomba tokana ahafahanao manatanjaka ny hozatra manodidina ny lohalika izay manamaivana ireo firafitry ny tena fiaraha-miasa - ary raha avy amin'ny endrika pilina izany, dia ho naka ny pilina tokoa ny tsirairay! Nefa satria mila ezaka be dia be izany dia tsy mora foana.
Amin'ity dingana ity, ny dokotera dia mety manomboka manomboka ny hanao vaksiny amin'ny tsindrona kortisone. Cortisone dia steroid izay, rehefa tsindrona ao amin'ny tonon-taolana, afaka (amin'ny tranga maro) dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny fanaintainan'ny tonon-dohalika. Na izany aza, ny fikarohana dia naneho fa ny fiatraikany matetika dia maharitra aorian'ny roa volana ary fa amin'ny fotoana maharitra, ny tsindrona cortisone toy izany dia mety hiteraka faharatsiana miaraka (2). Ny fanafody mahery vaika ihany koa dia azo aroso, saingy indrisy fa ny hery mahery vaika dia ny vokatra lehibe kokoa ao aminy.
Ny ginger dia azo atolotra ho an'izay mijaly amin'ny rheumatic joint aretina - ary fantatra ihany koa fa io faka io dia manana tombony maro hafa azo avy amin'ny fahasalamana hafa. Izany dia satria ny sakamalao dia misy fiantraikany mahery vaika amin'ny fanoherana ny inflammatoire. Betsaka ny olona voan'ny osteoarthritis no misotro sakamalao toy ny dite - ary avy eo dia tsara kokoa hatramin'ny in-3 isan'andro mandritra ny vanim-potoana izay matanjaka be ny fivontosan'ny tonon-taolana. Afaka mahita fomba fahandro vitsivitsy ianao amin'ity rohy eto ambany ity.
Vakio koa: - Tombontsoa fahasalamana tsy mampino 8 amin'ny fihinanana sakamalao
Ny dingana 4 no dingana fahadimy sy lehibe indrindra amin'ny osteoarthritis - ny olona voasokajy amin'ity sokajy ity dia matetika no nahita fanaintainana sy tsy fahazoana aina rehefa mandeha na mihetsika eo amin'ny lohalika. Ny fanaintainana dia vokatry ny fihenan'ny elanelan-tany eo anelanelan'ny lohalika amin'izao fotoana izao ary nihena be - izay midika koa fa saika reraka ny tazom-bozaka rehetra ary mamela taolana mafy, saika tsy mandeha intsony, mandohalika.
Ny fihenan'ny habakabaka ao anaty lohalika dia midika fa misy fifandonana sy fifandonana eo amin'ireo rafitra anatomika samihafa - izay manampy amin'ny fampitomboana ny fanaintainana sy ny soritr'aretina fotsiny. Matetika dia mihena tokoa ny fiasa ka tsy afaka mihetsika ny marary raha tsy misy fanaintainana mafy - ary noho izany dia matetika no dinihina ny fomba fitsaboana mahery vaika amin'izao fotoana izao.
Ny fandidiana sy ny prostostika?
Ireo tranon-doha malemy, na semi-denture na fantsin-jaza feno, dia toerana farany natao ho an'ny olona voan'ny aretin-doha be dia be toy izany. Amin'ny fomba fandidiana toy izany dia hesorin'ilay mpandidy ny tonon-taolana rehetra simba ary soloina plastika na metaly amin'ny prostesis. Ny voka-dratsin'ny fandidiana toy izany dia mety ahitana areti-mifindra sy lalan-dra. Matetika dia maharitra volana maro ny fotoana fanarenana - ary midika izany fa tsy maintsy hentitra ianao amin'ny fanatontosana fampiofanana nomena anao.
Na dia miafara amin'ny famokarana lohalika aza ianao dia ilaina ny manasongadina fa mbola mila mifantoka amin'ny fepetra mandray anjara amin'ny fahasalamana amin'ny lohalika tsara ianao - toy ny fihazonana ny lanjany ara-dalàna sy ny fanatanjahan-tena manokana. Angamba ianao afaka mifandray amin'ny mpitsabo aretin-tsaina any an-toerana na amin'ny kiropraktika maoderina raha tsy azonao antoka ny karazana fanazaran-tena tokony hataonao?
Fanoloran-tena ho an'ny tenany manokana amin'ny fanaintainana Rheumatic sy Chronic
Mpisintona rantsan-tongotra (ampiasaina hampisarahana ny rantsan-tongotra ary hisorohana ny rantsan-tongony miondrika - toy ny hallux valgus, ny rantsan-tongotra lehibe miondrika)
Vakio koa: - Tombony ara-pahasalamana 7 mahafinaritra amin'ny fihinana turmerika
Fampahalalana misimisy kokoa? Midira amin'ity vondrona ity!
Midira ao amin'ny vondrona Facebook «Rheumatism sy fanaintainan'ny aretina - Norvezy: Fikarohana sy vaovao»(Tsindrio eto) raha ny fanavaozana farany momba ny fikarohana sy ny fanoratana media momba ny aretim-po na aretin-tsaina. Eto, ny mpikambana dia afaka mahazo fanampiana sy fanohanana - isaky ny andro ihany - amin'ny alàlan'ny fifanakalozana ny zavatra niainany sy torohevitra.
VIDEO: fanatanjahan-tena ho an'ireo rheumatista sy ireo tratry ny fibromyalgia
Aza misalasala misoratra anarana amin'ny fantsona antsika - ary araho ny pejinay ao amin'ny FB raha mila torohevitra momba ny fahasalamana isan'andro sy programa momba ny fanatanjahan-tena.
Manantena mafy izahay fa ity lahatsoratra ity dia afaka manampy anao amin'ny ady amin'ny aretim-panafody sy ny fanaintainana maharitra.
Ary, mila mangataha tsara mba hizara ity lahatsoratra ity amin'ny media sosialy na amin'ny alàlan'ny bilaoginao (aza misalasala mifandray amin'ny lahatsoratra). Ny fahatakarana sy ny fitomboan'ny fifantohana no dingana voalohany mankany amin'ny fiainana andavanandro tsara kokoa ho an'ireo izay manana fanaintainana maharitra.
Hikasika ity mba hizarana fanampiny. Fisaorana lehibe ho an'ny rehetra izay manampy amin'ny fampiroboroboana ny fahatakarana ny fanaintainan'ny fanaintainan'ny fanaintainana!
Safidy B: Mifandraika mivantana amin'ny lahatsoratra ao amin'ny bilaoginao.
Safidy C: Manaraha sy mitovitovy Pejinay Facebook (tsindrio eto raha ilaina)
ary tadidio ihany koa ny mamela isa naoty kintana raha tianao ilay lahatsoratra:
(Manaraha sy manome hevitra raha tianao ny hanaovanay horonantsary miaraka amin'ny fanazaran-tena na toby ho an'ny olanao)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/de-5-stadiene-av-kneartrose.jpg?media=1648573622 368 700 loza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 loza2018-10-06 09:02:332021-03-24 14:47:04Ny sehatra 5 amin'ny Kneartrose
6 Famantarana mialoha ny Osteoarthritis
06 / 10 / 2018 /Fanamarihana 0/i Osteoarthritis (Osteoarthritis), rheumatism/av loza
Osteoarthritis dia fantatra amin'ny hoe osteoarthritis ary miaraka amin'ny akanjo miaraka sy fanimbana miaraka. Miaraka amin'ireto famantarana enina ireto dia afaka mahita osteoarthritis ianao amin'ny dingana voalohany - ary amin'izany maka ny fepetra mety mifandraika amin'ny fitsaboana, sakafo ary fanatanjahan-tena.
Osteoarthritis dia toe-javatra mitambatra miteraka vokatry ny fanaovana akanjo. Rehefa mihalehibe ianao, dia mety hihena ny ratra mahamay ao anaty ny tonon-taolana, ka mahatonga ny taolana mikosoka amin'ny taolana. Ny fifamaliana toy izany dia mety hiteraka fihanaky ny tonon-taolana tafiditra ao. Ny rantsantanana, ny tànana, ny lohalika, ny kitrokely ary ny hip no faritra tena tratran'ny osteoarthritis.
Ity lahatsoratra ity dia handalo ny famantarana am-piandohan'ny osteoarthritis. Eo am-pototry ny lahatsoratra azonao atao koa ny mamaky tsikera avy amin'ny mpamaky hafa, ary koa mijery horonantsary fanazaran-tena izay namboarina ho an'ireo voan'ny osteoarthritis amin'ny hip.
SOSO-KEVITRA: Betsaka ny olona mampiasa azy fonon-tànana famatrarana namboarina manokana (misokatra amin'ny varavarankely vaovao ny rohy) ho an'ny fanatsarana ny asa amin'ny tanana sy amin'ny rantsantanana. Ireo dia mahazatra indrindra eo amin'ireo rheumatologists sy ireo izay mijaly amin'ny syndrome carnel tunnel maharitra. Mety misy koa mpantsaka rantsan-tongotra og ba kiraro fametahana namboarina manokana raha manelingelina anao ny rantsan-tongotra henjana sy maratra - mety ho hallux valgus (rantsantanana lehibe mivadika).
Ny fanaintainana ao amin'ny tonon-taolana sy ny hozatra eo akaikiny dia mety ho famantarana ny aretin-kozatra. Rehefa mivoatra ny atin'ny osteoarthritis ary miditra amin'ny aretin-tsaina tazobe, dia mety hanantena ny fitomboan'ny fanaintainana miaraka amin'ny faritra voakasik'izany koa.
Ny fomba tsara indrindra hisorohana ny akanjo miaraka dia ny fanamafisana ny hozatra fitoniana eo akaiky eo. Ny fisorohana toy izany dia amin'ny fanamafisana ny hozatra izay hanamaivanana ny tonon-taolana. Ohatra, ny fampiofanana ny feny, seza sy ny andilany dia mety ho fomba tsara hanamaivanana ny hip sy ny lohalika (1). Ity lahatsary eto ambany ity dia mampiseho ohatra momba ny fanazan'ny osteoarthritis hip.
SARIPIKA: Fanaovana fanatanjahantena 7 amin'ny Osteoarthritis amin'ny Hip (Tsindrio etsy ambany hanombohana ilay horonantsary)
2. Fanamaivanana fanerena
Ny aretim-po dia tsy fahatsapana tsapanao rehefa misy olona manery na mikitika ny sendra mafy voan'ny osteoarthritis. Amin'ny ambaratonga farany ho an'ny osteoarthritis dia afaka mahatsikaritra ny fahitana sy ny mamontsina koa ny tonon-taolana voakasik'izany.
3. Fanamafisana ifotony
Ny fanaintainana iraisana dia miteraka hamafisan'ny fiarahan-dia ny fihenan'ny fiasa sy ny fivezivezena amin'ireo faritra voakasik'izany. Mazava ho azy fa ara-dalàna tanteraka ny henjana kely amin'ny tonon-taolana rehefa mifoha maraina ianao vao maraina - na aorian'ny fiasana amin'ny solosaina tontolo andro - fa mety ho famantarana ny osteoarthritis ihany koa io.
Ny fitsaboana ara-batana (toy ny fanentanana miaraka ary fitsaboana traction) dia nandrakitra ny fahombiazana amin'ny fanatsarana ny fiasa sy ny fientanentanana amin'ny vongan-jaza ambany, pelvis ary ny tenda. Raha tratry ny hamafin'ny maraina ianao dia tena mamporisika anao izahay handia ny fiainanao andavan'andro ary apetraho amin'ny tenanao ny fanontaniana hoe: "Mivezivezy kely loatra aho mandritra ny andro?"
Tokony ho tsaroantsika fa izy io dia mihetsiketsika sy hetsika izay mandray anjara amin'ny tohanan'ny ra any amin'ny hozatra, tendon ary tonon-taolana mafy. Io fitomboan'ny fitomboana io dia mitondra fitaovam-panamboarana sy fananganana barazy, mba hahafahan'ny asa fikojakojana ny tonon-taolana sy ny hozatra.
Ny fitsaboana manual (toy ny fitsaboana aretin-kibo sy hozatra), fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena miaro tena dia fanalahidy amin'ny fisorohana ny hozatra mafy sy hozatra mafy. Manoro hevitra anao izahay hampiasa mpiasan'ny fahasalamana nahazo alalana ampahibemaso, manam-pahaizana momba ny hozatra ary - ireo asa telo manana an'io mari-pahaizana io any Norvezy dia ny mpitsabo aretin-tsaina, ny fitsaboana ara-batana ary ny fitsaboana amin'ny tanana. Raha sarotra aminao ny mampiofana amin'ny fomba nentim-paharazana - dia afaka manolotra ihany koa izahay fiofanana amin'ny dobo rano mafana.
4. Fipihana, fikosehana ary fikapohana ao anaty Joints
Ny cartilage ao anaty tonon-taolana dia tokony hihetsika ho toy ny fanentanana manaitra ny fanampiana hampihenana ny tonon-taolana raha mihodina ianao. Raha potika ity taolam-paty ity, dia mety hitranga ny fifandonana amin'ny taolana amin'ny taolana amin'ny tranga matotra kokoa, ary koa soritr'aretina iraisana marobe - toy ny fanindriana, fikolokoloana ary fanoratana ao anaty ny vatan'ny tonon-taolana.
Ohatra, raha sendra mikapoka sy manitsaka ao anaty lohalika mandohalika ianao rehefa mandeha dia afaka manao izany ny fanohanan'ny lohalika (misokatra amin'ny varavarankely vaovao) dia fitaovana ilaina hanampiana ny faharetan'ny lohalika ary mampitombo ny fikorianan'ny ra ao an-toerana. Maro koa no manomboka amin'ny fiofanana mahazatra mba hanamafisana ny tonon-taolana amin'ny fomba tsara sy azo antoka.
5. Mihena ny fiaraha-mientana
Ny olona voan'ny osteoarthritis, na dia am-boalohany aza, dia mety hahita fa tsy mora ny mandroso intsony. Ny hamafin'ny fanamafisana sy ny fanaintainana miaraka dia manampy amin'ny fampihenana ny fahalefahana sy ny fientanam-po amin'ny tonon-taolana sy ny hozatra.
Ity hetsika mihetsiketsika ity dia mety hitombo satria ny osteoarthritis dia mihamalalaka hatrany ao anaty tonon-dra voadona. Zava-dehibe noho izany ny fanoherana an'io fivoarana io amin'ny alàlan'ny fandraisana fepetra fisorohana toy ny fanazaran-tena amin'ny fanazaran-tena sy ny fepetra amin'ny tena - ary koa ny fitsaboana matihanina raha ilaina izany.
6. Miovaova isan'andro sy madiva amin'ny maraina
Angamba efa tsikaritrareo fa toa ny maraina ny tonon-taolanao? Marika mampiavaka ny osteoarthritis izy io fa ny tonon-taolana dia milaza fa mafy kokoa sy mangidy amin'ny fahatsiarovan-tena fa tsy tamin'ny fotoana niantombohan'ny hetsika voalohany. Mahatsiaro mahatsiaro ho maivamaivana kokoa ianao ny maraina noho ny teo aloha mety ho famantarana ny aretin-tsaina.
Na izany aza, rehefa miharatombo ny osteoarthritis, mihamafy ny ora fanaintainana. Ohatra, mety ho ny fandehanana fotsiny no nahatonga ny fanaintainana taminao, taloha, fa kosa mandeha amin'ny alàlan'ny dian-tongotra kely kokoa ianao izao. Famantarana iray hafa fa ny osteoarthritis dia mivoatra ary mila mandray fepetra fisorohana ianao mba hampihenana na hampitsahatra ny fihena.
Vakio koa: - Fepetra voajanahary miady amin'ny inflammatoire 8 miady amin'ny rumatika
Vonona hanampy anao ity diagnosa ity
famatrarana Noise (ohatra, ny ba kiraro mampitambatra izay miteraka fihenan'ny rà amin'ny hozatra maharary)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/6-tidlige-tegn-på-artrose.jpg?media=1648573622 368 700 loza https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 loza2018-10-06 13:38:522021-03-24 13:58:116 Famantarana mialoha ny Osteoarthritis
Pejy 1 amin'ny 41234